6: Kzoo Downtown, Mills amagumbi aqeshwe ngokupheleleyo
Eyenyulwe kakuhle isandula kulungiswa igumbi eli-1 lokuSebenza ngokuSebenzayo kwisakhiwo esidala esidala esakhiwe ngo-1903, kufutshane neDowntown Kalamazoo kunye nesenzo. Ukuthengisa amafama, ii-pubs, iindawo zokutyela, iiklabhu zasebusuku, iivenkile kunye nokunye. Ikwakufutshane nesibhedlele saseBronson kunye neSibhedlele saBantwana, kunye noluhlu olubanzi lweeBoutiques kunye neshishini. Le ndlu iza nekhitshi epheleleyo, indawo yokuphumla yeLeather etofotofo, intambo, iWifi kunye nebhedi etofotofo ukuze uphumle xa usuku lwakho lugqityiwe, simahla kwindawo yokupaka esitratweni.
UHLAZIYO lwe-COVID-19: Ukuqinisekisa ukhuseleko lweeNdwendwe zethu siye sanyusa ukucoca kwethu ukuze siquke iApartment epheleleyo ecocekileyo kunye nonyango oluneAntiseptic yorhwebo yoHlelo lwezoNyango ukukhusela kwiintsholongwane emva kokuba undwendwe ngalunye luphumile. Ngenxa yoko asikwazi ukuvumela ukuba kungene kwangoko ngenxa yexesha elongeziweyo elifunekayo emva kokuhlala ngakunye, kwaye siyathemba ukuba uyaqonda.
Le yindlu esebenzayo enamagumbi ama-3 ewonke, Igumbi lokulala elahlukileyo, Ikhitshi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlala. Indawo yokupaka yasimahla yangaphandle kwesitalato, ukufudumeza kwegesi, kwifestile yokupholisa umoya, ikhitshi elimiselwe ngokupheleleyo elinoluhlu lwerhasi, iMicrowave, umatshini weKofu, isibandisi esipheleleyo sentsimbi yokupheka (10 cf). I-Wi-Fi yasimahla kunye ne-TV kwaye ingaphantsi kweemayile ezi-1 ukusuka eSibhedlele nakwidolophu yaseKalamazoo.
Le yindlu epheleleyo, ukufikelela kusetyenziswa ikhowudi engundoqo eguqulwayo emva kokubhukisha ngakunye.
Uya kuthunyelwa ikhowudi yakho yesitshixo kwiintsuku ezimbalwa phambi kokungena kwakho. Ukupaka ngaphandle kwesitalato ukuya kwelinye icala lesakhiwo, okanye ngasemva kwesakhiwo ekufikelelekayo ngendlela esecaleni kwendlela, akukho ndawo yokupaka ikhethiweyo.
Lo ngummandla omdala wemizi-mveliso/weendawo zokuhlala ezixubeneyo kumbindi wedolophu yaseKalamazoo ovuselelwayo kwaye uphantsi kwenguqu, isakhiwo sethu sakhiwa ngo-1903 kwaye sikwalungiswa ngokutsha ngelixa sizama ukugcina inkangeleko "yeMveliso". Sincoma ukuzama, I-Black Owl Cafe yekofu eyoyikekayo kunye nokutya, Ndwendwela i-Union brew pub yomculo ophilayo, ukutya okulungileyo kunye noluhlu oluhle lweebhiya kunye nee-cocktails. Olunye ukhetho olukhulu lokutya lubandakanya uMdaniso woKutya, uMgaqo, iZazios ukukhankanya ezimbalwa.
Isakhiwo seApartment sikummandla omncinci, otshintshayo owahlukileyo obekwe ngaphantsi kwe-1 yeemayile ukusuka kwiDowntown Kalamazoo, iBorges kunye neSibhedlele saseBronson malunga ne-1.4 yeemayile kude.
Lo mmandla uhlaziywa kwaye nangona umsebenzi omninzi wenziwe ukuhlaziya indawo yokuhlala, kukho abanini abambalwa abacothayo kunabanye ukuqala ukulungisa iipropati zabo. Uya kubona abantwana bekhwele iibhayisekile zabo kunye neentsapho ezincinci zihamba nezinja zabo. Usenokubona umqhubi eqhuba esitratweni okanye edlala umculo wakhe phezulu. Emva koko, ukwamkela iyantlukwano sisitshixo sobomi obuvisisanayo.
Ngokuhlala ixesha elide kuneveki, sibonelela ngenkonzo yokutshintsha ilinen kunye netawuli kanye ngeveki.
Qaphela malunga nesakhiwo: Nangona inokuba indala kwaye ikhangeleke njengemizi-mveliso ngaphandle ungavumeli le nto ikhohlisayo, abanini batyala imali kwisakhiwo kwaye bayenza ngokucothayo, isicwangciso kukugcina inkangeleko yoshishino ngaphandle. ngelixa uhlaziya ngokupheleleyo izinto zangaphakathi. Kukho inani labahlali abasisigxina abahlala apho kwezinye iiApartments kwaye siyathemba ukuba uyakonwabela ukuhlala kwakho kwindawo yethu.
Qaphela malunga nesakhiwo: Nangona inokuba indala kwaye ikhangeleke n…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kalamazoo